Show All Most Popular Cutlery Hot Pot (Single) Hot Pot (Set) Cold Curry (အအေးဟင်းလျာများ)(အအေးဟငျးလြာမြား) Special Hot Pot (ဟော့ပေါ့သီးသန့်အထူးဟင်းလျာများ/ဟော့ပေါ့သီးသနျ့အထူးဟငျးလြာမြား) Dessert (အချိုပွဲအမျိုးအစားများ)(အခြိုပှဲအမြိုးအစားမြား) Juice
Hot Pot (Single)
Hot Pot (Set)
Cold Curry (အအေးဟင်းလျာများ)(အအေးဟငျးလြာမြား)
Special Hot Pot (ဟော့ပေါ့သီးသန့်အထူးဟင်းလျာများ/ဟော့ပေါ့သီးသနျ့အထူးဟငျးလြာမြား)
Dessert (အချိုပွဲအမျိုးအစားများ)(အခြိုပှဲအမြိုးအစားမြား)
No.51(C+D), Kabar Aye Pagoda Road,, Yangon, MM Yankin
Sunday11:30 - 17:30
Monday11:30 - 17:30
Saturday11:30 - 17:30
906. ငါးအသားလွှာကြံမဆိုင်ချဉ်စပ်/ငါးအသားလှာကွံမဆိုငျခဉျြစပျ
002. ချုံချင့်အရသာစစ်စစ်မာလာဟော့ပေါ့/ခြုံခငျြ့အရသာစဈစဈမာလာဟော့ပေါ့
Mala Hot Pot (မာလာဟော့ပေါ့ဟင်းရည်)(မာလာဟော့ပေါ့ဟငျးရညျ)
109. Mala Chicken Bone (မာလာကြက်အရိုးနု)(မာလာကွကျအရိုးနု)
Healthy Pork Rib Hot Pot (ကျန်းမာနုပျိုစေသောဝက်ရိုးဟင်းချို)(ကနျြးမာနုပြိုစသေောဝကျရိုးဟငျးခြို)
Healthy Mushroom Hot Pot (ကျန်းမာနုပျိုစေသောမှိုဟင်းချို)(ကနျြးမာနုပြိုစသေောမှိုဟငျးခြို)
Buns (steamed/Fried) (ရွှေငွေမန်းထုံး /ရှငှေမေနျးထုံး)
Duck Intestine (ဘဲအူ)
939. ကြက်သွန်ဖြူရိုမိန်းရွက်ကြော်/ကွကျသှနျဖွူရိုမိနျးရှကျကွျော
Healthy Tomato Hot Pot (ကျန်းမာနုပျိုစေသောခရမ်းချဉ်သီးဟင်းချို)(ကနျြးမာနုပြိုစသေောခရမျးခဉျြသီးဟငျးခြို)
Spicy & Sour Soup (ချဉ်စပ်ဟင်းရည်)(ခဉျြစပျဟငျးရညျ)
003. ကျန်းမာရေးနှစ်မျိုးစပ်ဟော့ပေါ့အရည်/ကနျြးမာရေးနှဈမြိုးစပျဟော့ပေါ့အရညျ
004. ဟင်းရွက်ဆီမာလာဟင်းချို၊ ၀က်ရိုးဟင်းချို/ဟငျးရှကျဆီမာလာဟငျးခြို၊ ဝကျရိုးဟငျးခြို
005. ဟင်းရွက်ဆီမာလာဟင်းချို၊ သတ်သတ်လွတ်မှိုဟင်းချို/ဟငျးရှကျဆီမာလာဟငျးခြို၊ သတျသတျလှတျမှိုဟငျးခြို
006. ကျန်းမာနုပျိုစေသောဝက်ရိုးဟင်းချို/ကနျြးမာနုပြိုစသေောဝကျရိုးဟငျးခြို
008. ကျန်းမာနုပျိုစေသောခရမ်းချဉ်သီးဟင်းချို/ကနျြးမာနုပြိုစသေောခရမျးခဉျြသီးဟငျးခြို
009. ဟင်းရွက်ဆီမာလာဟင်းချို၊ ဆေးမြစ်ဆုံချုံချင့်မာလာဟော့ပေါ့/ဟငျးရှကျဆီမာလာဟငျးခြို၊ ဆေးမွဈဆုံခြုံခငျြ့မာလာဟော့ပေါ့
010. ဟင်းရွက်ဆီမာလာဟင်းချို၊ ဆေးမြစ်ဆုံဟော့ပေါ့/ဟငျးရှကျဆီမာလာဟငျးခြို၊ ဆေးမွဈဆုံဟော့ပေါ့
011. ဟင်းရွက်ဆီမာလာဟင်းချို၊ ဆေးမြစ်ဆုံ ခရမ်းချဉ်သီးဟင်းချို/ဟငျးရှကျဆီမာလာဟငျးခြို၊ ဆေးမွဈဆုံ ခရမျးခဉျြသီးဟငျးခြို
Spicy & Sour Soup (ချဉ်စပ်ဟင်းရည်) (ခဉျြစပျဟငျးရညျ)
106. Hot & Sour Cucumber Salad (သခွားသီးချဉ်စပ်)(သခှားသီးခဉျြစပျ)
Mala Beef (မာလာအမဲသား)
Pork Brain (၀က်ဦးနှောက်) (ဝကျဦးနှောကျ)
Swan Intestine (ငန်းအူ /ငနျးအူ )
Chicken Liver (ကြက်မြစ်)(ကွကျမွဈ)
251. Tiger Prawn (ကျားပုစွန်)(ကြားပုစှနျ)
254. Scallops (ကမာ)
901. Fried Mala Tiger Prawn (မာလာကျားပုဇွန်ကြော်)(မာလာကြားပုဇှနျကွျော)
907. Mala Fish Sliced (မာလာငါးအသားလွှာ)(မာလာငါးအသားလှာ)
909. ကြက်ငရုတ်အစပ်ကြော်/ကွကျငရုတျအစပျကွျော
908.Mala Clam (ဂုံးမာလာ)
911. ကြက်သားအာလူးချက်အချို/ကွကျသားအာလူးခကျြအခြို
914. Chicken Kong Pao (ကြက်ကုန်းဘောင်)(ကွကျကုနျးဘောငျ)
918. ကြက်သားငရုတ်သီးစိမ်းကြော်/ကွကျသားငရုတျသီးစိမျးကွျော
919. ၀က်အူပိတ်အစပ်ကြော်/၀ကျအူပိတျအစပျကွျော
920. သုံးထပ်သားအစပ်ကြော်/သုံးထပျသားအစပျကွျော
921. ဂုံးရှည်အစပ်ကြော်/ဂုံးရှညျအစပျကွျော
926. ၀က်ကျောက်ကပ်အစပ်ကြော်/၀ကျကြောကျကပျအစပျကွျော
927. ကြက်မြစ်အစပ်ကြော်/ကွကျမွဈအစပျကွျော
929. ငရုတ်သီးအမဲအူကြမ်းကြော်/ ငရုတျသီးအမဲအူကွမျးကွျော
947. ကြွက်နားရွက်ကြက်သားကြော်/ကွှကျနားရှကျကွကျသားကွျော
934. အာလူးမျှင်ငရုတ်ပွကြော်/အာလူးမြှငျငရုတျပှကွျော
935. ၀က်ပေါင်ခြောက်ဂေါ်ဖီထုပ်ကြော်/၀ကျပေါငျခွောကျဂျေါဖီထုပျကွျော
949. ခရမ်းသီးဝက်သားအကြွပ်ကြော်/ခရမျးသီးဝကျသားအကွှပျကွျော
938. အာလူးလွှာချဉ်စပ် /အာလူးလှာခဉျြစပျ
943. ရွှေပဲရွက်တို့ဟူးဟင်းချို /ရှပေဲရှကျတို့ဟူးဟငျးခြို
953. Deep Fried Spicy Mushroom with Tofu (မှိုတို့ဟူးအစပ်ကြော်)(မှိုတို့ဟူးအစပျကွျော)
948. အော်စွန်းဝက်သားကြော်/အျောစှနျးဝကျသားကွျော
946. Steamed Pork (၀က်သားပေါင်း)(ဝကျသားပေါငျး)
951.Pork Fried Vermicelli (၀က်သားကြာဇံကြော်/၀ကျသားကွာဇံကွျော)
954. Steamed Prawn with Egg (ပုဇွန်ကြက်ဥပေါင်း/ပုဇှနျကွကျဥပေါငျး)
955.Fried Maize with Chilli (ငရုတ်သီးပြောင်းဖူးကြော်/ ငရုတျသီးပွောငျးဖူးကွျော)
952. Mala Tofu (မာလာတို့ဟူး)(မာလာတို့ဟူး)
Sesame Tangyuan (မုန့်လုံးရေပေါ် /မုနျ့လုံးရပေျေါ )
Pumpkin pic (ဖရုံသီးမုန့် /ဖရုံသီးမုနျ့ )
Crispy Pork Slice (စလုကြော်/စလုကွျော)
Watermelon Juice (ဖရဲသီးဖျော်ရည်)(ဖရဲသီးဖြျောရညျ)